वि.सं ८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १८:२३
काठमाडौ : स्वास्थ्य क्षेत्रको अब्बल रहेको विराटनगरले पछिल्लो एक महिनामा दुई वरिष्ठ चिकित्सकहरुलाई गुमाएको छ । अर्काेपेडिक सर्जन डाक्टर मुकुन्द दाहालको निधन भएको २० दिन बित्न नपाउदै बरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर बिमल अग्रवालको निधन भएको छ ।
दाहाल र अग्रवाल दुबै कोशी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत थिए । गत बैशाख १८ गते डाक्टर दाहालको काठमाडौंमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो भने मंगलबार राति विराटनगरमा डाक्टर अग्रवालको निधन भएको हो । दुई डाक्टरको निधनले कोशी अञ्चल अस्पतालाई अपुरणीय क्षति पुगेको कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट डाक्टर रोशन पोखरेल बताउँछन् । दुई जनाको स्थानमा काम गर्ने अन्य डाक्टर नरहेको उनले बताए ।
बरिष्ठ र चर्चित डाक्टरहरुको निधनले गर्दा सर्वसाधरणले दुःख पाउने सम्भावना बढी रहेको उनले बताए । ‘सबै डाक्टर नाम चलेका छैनन्’, उनी भन्छन् ‘नाम चलेका डाक्टरहरुको निधन हुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाउँछन् ।’ विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली पनि विराटनगरलाई ठूलो क्षति पुगेको बताउँछन् ।‘डाक्टर दाहाल र अग्रवाल सामाजिक क्षेत्रमा क्रियासिल हुनुहुन्थ्यो ।’ उनी भन्छन ‘उहाँहरुको मृत्युले अपुरणिय क्षति पुगेको छ ।’
डाक्टर अग्रवाल विपन्नलाई निःशुल्क सेवा गर्ने व्यक्ति भएको उनले बताए । सरल स्वभावका डाक्टर अग्रवालको असमाहिक निधनले स्तब्ध बनाएको उनले बताए ।
दाहालको शल्यक्रिया बिग्रियो, अग्रवाललाई मस्तिष्कघात
वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डाक्टर मुकुन्द दाहालको गत बैशाख १८ गते निधन भएको हो । दिल्लीको एम्स अस्पतालमा टाउकोको अप्रेशन बिग्रिएपछि उनी करिब दुई वर्षयता विरामी थिए । टाउकोको नसामा समस्या भएपछि एम्स अस्पताल भर्ना भएका डाक्टर दाहालको करिब ६ महिना एम्समा उपचार गर्दा सफल नभएपछि काठमाडौं ल्याइएको थियो । काठमाडौंमा उपचारकै क्रममा निधन भएको थियो । कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दाहाल हाम्रो अस्पताल विराटनगरका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् । उनी नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष थिए ।
डाक्टर दाहालको निधन भएको ६ दिन पछि अग्रवाललाई गत बैशाख २४ गते मष्तिष्कघात भएको थियो । पूर्व क्षेत्रका चर्चित बाल रोग विशेषज्ञ डा. बिमल अग्रवालको मंगलबार राति नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर मंगलबार निधन भएको हो । विराटनगर घर भएका डाक्टर अग्रवाल कोसी अस्पताल विराटनगरमा कार्यरत थिए । उनी बालबालिका क्लिनिकका सञ्चालक पनि थिए । ४३ वर्षीय डा. अग्रवाल पूर्वीक्षेत्र चर्चित बालरोग विशेषज्ञ हुन्
दुई वरिष्ठ चिकित्सक
पाटे बाघको छाला २४ लाख मूल्यमा बार्गेनिंग गर्दैगर्दा २ पक्राउ, ३ जना फरार